फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? Canada Nepal
काठमाडौं - शुक्रबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । बिहिबार तोलामा ५ सय रुपैयाले बढेको सुनको मूल्य आज तोलामा २ सय रुपैयाले बढेको हो ।
बिहिबार प्रतितोला ९० हजार ४ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज बढेर तोलाको ९० हजार ६ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला ९० हजार १५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । आज चाँदीको मूल्य स्थिर रही तोलाको ११ सय ७० रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।
आश्विन २२, २०७८ शुक्रवार ११:१२:२० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन आज बिहीबार रहेको छ । बैंकले साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि शुक्रबार बुकक्लोज गर्दै छ । यसअनुसार बिहीबारसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयरधनीले सभामा सहभागिता जनाउन तथा लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
मंसिर १६, २०७८ बिहिवार १०:३०:२४ बजे : प्रकाशित
# एभरेष्ट बैंक
काठमाडौं । सिभिल बैंकले २४ मंसिरदेखि ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले वार्षिक १० दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘सिभिल बैंक डिबेञ्चर २०८८’ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्न लागेको हो ।
मंसिर १६, २०७८ बिहिवार ११:५४:०६ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । बुधबार तोलामा ४ सय रुपैयाले घटेको सुनको मूल्य आज स्थिर रहेको हो ।
बुधबार तोलाको ९१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज स्थिर रही सोही मूल्यमा नै कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य तोलामा १० रुपैयाले घटेर प्रतितोला एक हजार १ सय ९० रुपैयाँ कारोबार भइरहेको छ ।
मंसिर १६, २०७८ बिहिवार ११:२८:१२ बजे : प्रकाशित
शेयर बजार राताम्मे, दुई कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि
काठमाडौं - साताको अन्तिम कारोवार दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) ४९ दशमलव ४ अंकले घटेर राताम्मे भएको छ । आज नेप्से १ दशमलव ८६ प्रतिशतले घटेर दुई हजार पाँच सय ८४ दशमलब ६१ विन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको हो ।
मंसिर १६, २०७८ बिहिवार १८:१७:१७ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । शुक्रबार अमेरिकी डलरसहित अन्य देशको विनिमयदर बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १९ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय २० रुपैयाँ ३० पैसा तोकिएको छ ।
एक मलेसिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ३० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकिएको छ । एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ९५ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९७ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ।
एक बहराइन दिनारको खरिददर ३ सय १७ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १९ रुपैयाँ ९ पैसा तोकिएको छ। एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ६० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकिएको छ ।
एक युरोको खरिददर १ सय ३५ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १ सय ३६ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ९१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ७ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ५९ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६० रुपैयाँ ३० पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै जापानी यनको खरिददर १० रुपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १० रुपैया ६३ पैसा तोकिएको छ । यस्तै एक अस्ट्रेलियन डलरको खरिददर ८५ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ८५ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ ।
मंसिर १७, २०७८ शुक्रवार ०९:०८:५० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । बिहिबार स्थिर रहेको सुनको मूल्य आज तोलामा २ सय रुपैयाले घटेको हो ।
बिहिबार तोलाको ९१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर तोलाको ९१ हजार ३ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार १ सय ९० रुपैयाँ कारोबार भइरहेको छ ।
मंसिर १७, २०७८ शुक्रवार १२:४८:४३ बजे : प्रकाशित